Ajmal Mansour iyo xubno ka tirsan muslimiinta Britian oo looga digay khatarta Argagixisada – Radio Daljir
Oktoobar 20, 2013 2:42 b 0
London, October 20, 2013 – Muuqaal daawasho ah oo la dhigtay barta internetka ee Youtube saacadihii ina dhaafay ayaa loogu hanjabay qaar ka mid ah dadka ugu firfircoon muslimiinta Britian oo uu ku jiro Ajmal Mansour oo ah Imam masaajid iyo saxafi caan ah.
Wargayska The Gaurdian ayaa qoray in Rag aan la aqoon halka ay joogaan ayaa barta internetka ku baahiyeen muuqaalka oo lagu sheegay in la dilayo rag dhowr ah oo la magcaabay, waxaa lagu eedeeyey in ay diinta islaamka dhinac mareen.
Booliska Ingiriiska ayaa si rasmi ah ula xiriiray Ajmal Mansour iyo Maxamed Ansaar oo ah xubno firfircoon kana tirsan muslimiinta Britian, booliska ayaa uga digay xubnahaas khatar uga timaada Argagixisada.
The Guardian waxaa uu sheegay in qofka hanjabaada u jeediyey muslimiinta Britian uu si khaas ah ugu hadlayey lahjada British-ka.
Imam Ajmal Mansour iyo iyo saxafi Maxamed Ansaar ayaa labbaduba si kulul u canbaareeyey weerarkii Argagixiso ee lagu qaaday Westgate mall bishii hore, waxaana loo badinayaa sababta lagu beegsanayo in ay tahay hadalkooda.